ရေးချင်တာရေးသောကြောင့် …. ဖတ်ချင်မှ ဖတ်ပါ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရေးချင်တာရေးသောကြောင့် …. ဖတ်ချင်မှ ဖတ်ပါ …
ရေးချင်တာရေးသောကြောင့် …. ဖတ်ချင်မှ ဖတ်ပါ …
Posted by King on Dec 20, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Myanmar Gazette, Think Different | 24 comments
အခုတစ်လော ဖတ်ရတာတွေက ဗဟုသုတတွေ အများကြီးပေးနိုင်သလို အယူဝါဒ မတူညီမှုတွေကြောင့် ဆူညံနေတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိနေပြန်တော့ ဂေဇတ်ရွာကြီးဟာ ရွာကဘုရားပွဲ တမျှ စည်ကားနေလိုက်တာဗျာ… ဘုရားပွဲ ဆိုတော့ ဂေါပကအဖွဲ့ရဲ့ အလှူငွေ ထည့်ဝင်မှု သာဓု ခေါ်ဆိုပုံ၊ မုန့်တန်းတွေက မုန့်ရောင်းသူတွေအသံ၊ မုန့်ဆိုင်က ညှော်နံ့၊ မျက်လှည့်ပွဲက ဖိတ်ခေါ်သံ၊ ဇာတ်ပွဲဆီက တေးသံသာ ပြောရရင်တော့ စုံလို့ပေ့ါဗျာ … ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲရှိတာတွေ ထုတ်ရေးလိုက်တယ်ဗျ … ဖတ်ရမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း နောက်တစ်ပုဒ် ပြောင်းလိုက်ကြပါဗျ … ကဲ စပြီဗျာ
ကွိကွိ။ ဗျို့ ကိုကွကွ ဘယ်ရောက်နေလဲဗျို့
ကွကွ။ ဗျာ …ဗျ ကိုကွိလား …. လာလေဗျာ . …. ဒီမှာ စာအုပ်စင်ရှင်းနေတာဗျ .….
ကွိကွိ။ ခင်ဗျားစာအုပ်စင်က ကြီးသလို စာအုပ်တွေကလည်း များလှချည်လား … ဒါနဲ့ ခင်ဗျား ထမင်းရော စားပြီးပြီလားဗျ … အခု နာရီပြန် ၁ ချက်တောင် တီးတော့မယ်နော် ..
ကွကွ။ ဟေ … ဟုတ်လားကွ .. ငါ့မှာလည်း စာအုပ်မြင်ရင် မနေနိုင်ဘူးကွ … ဒါကြောင့် ခုထိ လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတာနေမှာကွ .. ဟီးဟီးးးးးး
ကွိကွိ။ ခင်ဗျားဗျာ ကဲကဲ ထမင်းသွားစား … ကျွန်တော်ခင်ဗျား စာအုပ်တွေ ရှင်းပေးထားမယ် … ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာတော့ ပြောထားခဲ့ဗျာ ..
ကွကွ။ စာအုပ်အတွင်းထဲမှာ တင်ရမယ့်စင်နံပါတ်ရယ် စာအုပ်နံပါတ်တွေရေ ရေးထားတယ် … စင်နံပါတ်အတိုင်း စင်ပေါ်မှာတင်ပြီး စာအုပ်နံပါတ်အလိုက် တန်းစီထားလိုက်ရုံပဲ … ဟိုတစ်လောက ဧည့်သည်တွေလာတုံး စာအုပ်တွေ ၀င်မွှေသွားပြီး နေရာတကျ ပြန်မထားသွားတော့ အခုလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကွာ ..
ကွိကွိ။ အဲဒါပြောတာပေါ့ဗျာ စည်းကမ်းဆိုတာ လူ့တန်ဖိုးဆိုတာ မသိလေရော့လားဗျာ … အင်း … ခက်တယ်ခက်တယ် … စည်းကမ်းအစ စာသင်ကျောင်းကတဲ့ … ဘယ်လိုကျောင်းတွေက မွေးထုတ်လာလဲမသိဘူး …. ပြောမယ်ပြောရတာ ခင်ဗျားမိတ်ဆွေတွေက ကျောင်းမနေခဲ့ရဘူးဆိုရင်တော့ ….
ကွကွ။ ဘယ်ကသာ ကျောင်းမနေရမှာလဲ …တစ်ချို့ တစ်ချို့ဆို မင်းတို့ငါတို့လို ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်မြေမှာတင် ဘွဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံခြားတိုင်ပြည်တွေကနေတောင် ဘွဲ့တွေ ယူလာတဲ့သူတွေပါတယ်ကွ …. ဒါပေမယ့်လည်း အကောင်းဘက်ကနေစဉ်းစားရင် ….. ချောင်ထဲရောက်နေတဲ့စာအုပ်တွေ …. တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဖတ်လက်စ စာအုပ်တွေ .. သဘောမပေါက်လို့ ဆက်မဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေ ပြန်တွေ့ပြီး ဖတ်မိရင်း စဉ်းစားတွေးတော သဘောပေါက်ခဲ့ပြန်တော့ ကျေးဇူးတောင် တင်ရအုံးမယ်ကွ …
ကွိကွိ။ နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ် တော်ကြာ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ဘွဲ့တွေဖြစ်နေပါအုံးမယ်ဗျ .. ဟား ဟားးးးးးးးးးးး
ကွကွ။ ငါ့မိတ်ဆွေတွေက အဲလိုလူတွေ မဟုတ်နိုင်လောက်ပါဘူးကွာ
ကွိကွိ။ ကိုယ်ကကျူး ကိုယ့်ဒူးမယုံရ ဆိုတဲ့ စကားပုံမေ့နေပြီးလားဗျ … ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံလေနဲ့ဗျ … အခုခေတ်က မပြောတော့ပါဘူးလေ ခင်ဗျားလည်း စာအုပ်တွေ အတော်ဖတ်တဲ့သူပဲ ကျုပ်ထက် ပိုသိမှာပါ ….
ကွကွ။ ကဲ မိတ်ဆွေလည်း ကျုပ်ထမင်းစားလိုက်အုံးမယ် … ခင်ဗျား ဆက်လုပ်ထားလိုက်အုံး … ခင်ဗျားနဲ့ ပြောမှပဲ ဗိုက်ထဲက ဂွီဂွီနဲ့ မြည်လာတော့တယ်
ကွိကွိ။ စားစား … အေးအေးဆေးဆေးကိုစား ကျုပ်ကို အားနားစာရာမလိုဘူးနော် … ကျုပ်လုပ်ထားလိုက်မယ်
ကွကွ။ ဘယ်လိုလဲဗျ .. စာအုပ်စင်ရှင်းတာ အဆင်ပြေရဲ့လားဗျ
ကွိကွိ။ အဆင်ပြေရုံတင်ဘယ်ဟုတ်မလဲ အတော်အကျိုးရှိတာပဲ … ကျုပ်တောင် စာအုပ်စင် တစ်ကန့်တောင်အပြီးမရှင်းနိုင်သေးဘူးဗျ … စာအုပ်တွေရှင်းရင်း ဖတ်လိုက်နဲ့ ကျုပ်တော့ တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျ …
ကွကွ။ ခင်ဗျားဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်က အရောင်တောင်ဝါကျင့်ကျင့် ဖြစ်ရုံမက စာအုပ်အဖုံးတွေတောင် စုတ်နေတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါလား … ခင်ဗျားက နေရာတကာ အသစ်အသစ် အော်နေတဲ့သူက ဘယ်နဲ့ စာအုပ်အဟောင်း ဖတ်နေတုံးဗျ ..
ကွိကွိ။ ဒါက ဒီလိုရှိတယ်လေ ကိုကွ ရဲ့ စာအုပ်ဆိုတာ မိန်းမနဲ့ အတူတူပဲဗျ … ခင်ဗျားလို လူပိုကြီး အဲ လူပြိုကြီးကို ပြောလည်း ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ကွကွ။ ခင်ဗျားကလည်း ကျုပ်က ခင်ဗျားလို မိန်းမ မရှိပေမယ့် အကြိမ်အရေအတွက်ကတော့ ခင်ဗျားထက်သာတယ်ဗျ …
ကွိကွိ။ တိန် ….. အဲဒါကြောင့် ခက်တာပေါ့ ခင်ဗျားတို့ဟာလေ ပြောကို မပြောချင်ဘူးဗျာ … ဒါနဲ့ ခင်ဗျား အလွှာတော့ ခြားပါတယ်နော်
ကွကွ။ ဘယ်နဲ့ပြောတာတုံး ကျုပ်က ကျန်းမာရေးအသိရှိပါတယ် … ခင်ဗျား မစိုးရိပ်ပါနဲ့ဗျာ
ကွိကွိ။ ခင်ဗျားကို စိုးရိမ်လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး .. ကလေးမတွေကို သနားလို့ ပြောတာ
ကွကွ။ ဟေ … ဟိတ်ကောင် ကလေးမတွေလို့ ပြောရအောင် မင်းက ကလေးမတွေကို သိလို့လားကွ
ကွိကွိ။ အဲ … (ဒုက္ခပဲ ငါတော့ ထိပြီ) ဒါက ဒီလိုရှိတယ်လေဗျာ ကျုပ်က NGO တွေမှာ လုပ်ဖူးတော့ အဲဒီလိုမိန်းကလေးအများစုက အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေဆိုတာ ကျုပ်သိနေတာ မဆန်းပါဘူး (ဟူးးးးး တော်သေးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ထုတ်နိုင်လို့ မဟုတ်ရင် ဒီလူဖွတာနဲ့ မိန်းမသိသွားရင် ညစာငတ်ပီ .. ညစာဆိုတာ အဲ မရှင်းတော့ဘူးဗျာ ရှင်းလေ ရှုပ်လေ ဖြစ်တော့မယ်)
ကွကွ။ ထားပါတော့ ထားပါတော့ … ဒါနဲ့ ခုဏက ခင်ဗျားပြောတဲ့ မိန်းမနဲ့ စာအုပ် တူတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါလိမ့်
ကွိကွိ။ ဒါက ဒီလိုရှိတယ်လေဗျာ .. ခင်ဗျား မဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဆိုရင် အသစ်ပဲ မဟုတ်လား ..
ကွကွ။ အေးလေ အသစ်ပဲပေါ့ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့စာဆိုရင် အသစ်ပဲ … အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုံး
ကွိကွိ။ ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ .. မိန်းမလဲ အဲဒီလိုပဲလေ ကိုယ်—– မိန်းမဆိုရင် လည်း အသစ်ပဲပေါ့ဗျ … စာအုပ်လိုပဲ သူ့က ဟောင်းချင်ဟောင်းမယ် … နွမ်းချင်နွမ်းမယ် … တစ်ချို့တစ်လေ ပြဲနေတာရှိချင်ရှိမယ် … အဖုံးစုတ်နေတာ ရှိချင်ရှိမယ် … ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ်သူ့ကို အခုမှ ဖတ်ဖူးရင် အသစ်ပဲ … ပြီးတော့ ဘယ်လောက် စုတ်ပြတ်သတ်နေပါစေ ကိုယ်တန်းဖိုးထားရင် တန်းဖိုးထားသလို ရှိနေမှာပဲ မဟုတ်လားဗျ … ခင်ဗျားက ကျုပ်ထက် အကြိမ်ရေသာတဲ့သူပဲ ဒီလောက်တော့ သိမှာပါဗျာ …. ဟဲဟဲ
ကွကွ။ သြော် ဒီလိုလား … ဒါဆိုရင် မင်းမိန်းမ မဒမ်ကွိ ရော ဘယ်စာအုပ်မှာပါသလဲကွ
တီ တီ တီ တီ တီ zzzzzzzzz
ကွိကွိ။ ဗျာ … ဟုတ်ကဲ့ … အခုထွက်လာခဲ့မယ် .. အင်း အင်း … အိုကေ …. ဘိုင့်
ကွိကွိ။ အလုပ်က အရေးကြီးလို့ လှမ်းခေါ်နေလို့ … သွားတော့မယ်ဗျာ နောက်မှလာခဲ့အုံးမယ်ဗျ
ကွကွ။ ဟေ့ ငါမေးတာ ပြောခဲ့အုံးလေကွာ
ကွိကွိ။ ဒါကလျှို့ဝှက်ချက်ဗျ … လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဘယ်သူ့မှ မပြောရဘူးလို့ မဟော်သဓာ သင်ခန်းစာက ကျောင်းတုံးက ပြောပြထားတယ်လေဗျာ … နောက်မှဆုံမယ်ဗျ … ဘိုင့်
ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ရေးချင်တာတော့ ရေးမိပြီ ပြောချင်တာတွေကို အောက်မှာပြောကြတော့ဗျ
has written 59 post in this Website..
View all posts by King →
ဒီစာကို မဒမ်ကင်းသာ ဖတ်မိခဲ့ရင်ဖြင့်
“ ဒုံ ၊ ဂွမ် ၊ ဂလောင် ”
ကိုကင်းရေ အစကတော့ ကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ် နောက်ပိုင်းလဲကျရော
တမျိုးကြီးဘဲဗျာ။ ပြောတတ်တော့ဘူး။ (^^)
@ ဘောလုံးဂုရုကြီး ကိုပေရေ
ကျွန်တော်က အိမ်ပြန်ရင်စားဖို့ ညစာအဆင်သင့် မရှိသေးဘူးဗျ (ပြန်မှ ချက်ရမှာလေ … )
“ ဒုံ ၊ ဂွမ် ၊ ဂလောင် ” အသံကတော့ ကြားရမှာပဲဗျို့ ညစာစားဖို့ အိုးတွေ လှန်လှောနေလို့လေ …
ရှိတဲ့ ဒေါသ ပြေတယ်ဆိုလို့ ပီတိဖြစ်ရတယ်ဗျ
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကို ဆူဆူညံညံဖြစ်ရင်တောင် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဆူညံသံလေးတွေနဲ့တင် ကြားချင်မိသူပါ
@ အပျိုချောတွေ အစဉ်ပြောတဲ့ ကိုသစ်ရေ
ကျွန်တော်လည်း ပထမတော့ မောင်းတင်ပြီး ရေးမလို့ပဲ နောက်ကျတော့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် တစ်ချို့ကိစ္စတွေက ချီးခြောက်ရေနှုးသလိုဖြစ်မှာလည်း စိုးတာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်အောင် ပေါ်လာသမျှ စော်ကချ … အဲ ရေးပစ်လိုက်တာပါ ….
ကွန်းမန့် ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် ပုံရိပ် ဆိုတော့
လက်လွှတ်စပယ် မမန်းရဲပါဘူး ကို ကင်းရေ။
စာအုပ်တွေဆိုတာ မိန်းမတွေနဲ့တူတယ် ..??
စာအုပ်တိုင်းဟာ ဘယ်စာအုပ်မျိုးမဆို အပေါ်ဖုံးကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာချည်းပဲ
ဦးကင်း (မကြိုက်ရင်) ဘဘကင်း
စာအုပ်တွေက မိန်းမတွေနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ စကားပုံလေးတစ်ခုသတိရလို့
Don’t judgeabook by it’s cover!! တဲ့
bold တလှည့် normal တလှည့် ရေးပြသွားတာကို
ဒါနဲ့ မိန်းမဆိုတာ …စာအုပ်မီဟုတ်ပါဝူးခီညာ …ကားပါဗျာ ကား …
မော်ဒယ်မြင့်ရမယ် …. အင်ဂျင်ကောင်းရမယ် ..ခိခိ
ကိုအင်ကြီးရဲ့ မော်ဒယ်လ်မြင့် အင်ဂျင်ကောင်းကားက
တစ်ချိန်ချိန်မှာ မော်ဒယ်လ်နိမ့်ပြီး အင်ဂျင်ကျသွားရင်ရော…..
ပြောင်ပြောင့် မေတ္တာစကြာဝဋာ .. နှစ်၃၀ ဆို ကျို လိုက်ပါ စီမံကိန်း
ပေါ်နေဘီလေ …တိဝူးလား..ဌာန မှာသွားအပ် ပီး သံရေကျိုစက် ပို့မယ် …ပီးမှ
ဂျာပွန်က အသစ် နောက်တစီး မှာ စီးပစ်မယ်…ခစ်ခစ်…
အဟိ….မီးမဆိုတာ တစ်ယောက်က ကားဒဲ့
တစ်ယောက် က စာအုပ်တဲ့..
တကယ်တော့ …မိန်းမဆိုတာ ဘီယာ ဗျ. ..
လတ်ဆတ်မှ အရသာရှိတာ …ဟီဟိ…….
ညီလေး အင်ဇာဂီ အဖြေ မှန်တယ် မမှန်တယ် နောက်ထား
လောလောဆယ် ကြိုက်လွန်းလို့ ပေးလိုက်တယ်
နောက်တာပါဗျာ …တကယ်တော့လည်း …မိန်းမဆိုတာ ….
ယောက်ျားတယောက်ဆီက အရေးကြီးတဲ့ မိန်း(main) တွေကိုချည်း
“မ” သွားမယ့် လူ ပါ….
အော် .. အခုမှပဲသိလိုက်တယ်
ဂီဂီက မိန်း(main ) မရှိတော့ဘူးကို
လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ ကွိကွိရ.. ရှင်းလင်းပါဦး… ဖတ်ရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်…
မှန်ဒယ်ဗျို့… မိန်းမဆိုတာ စာအုပ်လိုပဲ။ အသစ်မှာ တန်ဖိုးရှိတယ်၊ ဟောင်းလာတော့ တန်ဖိုးကျသွားရော။ မေ့လောက်ရှိပြန်တော့ တန်ဖိုးတက်လာသဗျို့… လုံးဝဟောင်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။။။။။။ အဲလိုမှမပြောလဲ….
@ လေး ပေါက် က
ဖတ်ချင်မှ ဖတ်ပါ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်ချင်လို့ ဖက်သွားကြောင်းပါ အဲ မှားလို့ ဖတ်သွားပါကြောင်း (စာကြွင်း။ လူကို မဆိုးဘူး လေးပေါက်က ၀တော့ ချမ်းနေတာနဲ့ အတော်ပဲ …. )
@ ဦး ချောရေ
ဦးချောရဲ့ လက်လွတ်စပယ် မမန်းရဲတဲ့စာတွေရော ပို့စ်တွေရော စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု့လျှက်
ကျွန်ုပ် Mg KING
@ ဦးပါ အဲ ဦးလေ ဒါလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး ဦးရာ မသိတော့ဘူးဗျာ ဦးဦး လို့ခေါ်တော့မယ် ဟူး မောလိုက်တာဗျာ
ဦးဦးရေ စာအုပ်အပေါ်မျက်နှာဖုံးက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီး အကုန်လုံးတော့ ငှားမဖတ်နဲ့နော် ….
@ Ko comegyi ရေ
နီကီတာ ပြောသလို စာကြည့်တိုက်မှူး လုပ်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော့်မှာတော့ အဲလောက်စာအုပ်တွေ အများကြီး မရှိဘူးဗျ .. ကျွန်တော်လည်း လိုချင်မိတယ် စာအုပ်ဆိုင်ဝင်မိရင် လိုချင်တာကတော့ အကုန်လုံးပဲ (ချွင်းချက်။ အရောင်းမိန်းကလေးများမပါ … တော်ကြာ သူတို့ပါ ပါတယ်ထင်နေမှာစိုးလို့ … အမှန်တော့ မရလို့ပါ … )
@ Moe Z ဆိုတဲ့ ကလေးမရေ
ညီမက ဘာလို့ Moe Z လို့ နာမည် ပေးထားတာလဲသိချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစ်ကိုက (အဲ ထားပါတော့ ဘကြီးပဲ) ဘကြီးက MoeZ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အကောင့်လုပ်ဖူးလို့ပါ …. ခံစားချက်တွေများ တူနေမလားလို့ …
@ ကို ဂီ ရေ
ကိုဂီရဲ့ မိန်းမ ဖွင့်ဆိုချက်တွေက များသားဗျာ … တော်တော် စုံပုံရတယ် .. (ခံစားချက်တွေကိုပြောတာပါ) … မိန်းမဆိုတာ မိန်းတွေမှန်သမျှ မ တယ်ဆိုတာကို ပိုသဘောကျမိရဲ့ …
@ kotun winlatt ရေ
မိန်းမဆိုတာ ကိုယ်ခံစားသလို ဖွင့်ဆိုကြတာပါဗျ (ကျွန်တော့်ညီလေးက ပြောတယ် မိန်းမဆိုတာ ခေါင်းစည်းကြိုးလိုပဲတဲ့ … အကျယ်တော့ မပြောတော့ပါဘူးလေ … )
@ မမ မနောရေ
ကွိကွိက လျှို့ဝှက်ချက်ကို ရှင်းရင် ညစာငတ်မှာစိုးလို့ ရှင်းမသွားတာပါလို့ ကိုယ်စားဖြေပေးလိုက်ပါတယ် …
လုံးဝမေ့သလောက်ရှိပြီး ဟောင်းနွမ်းသွားရင် ebay မှာ လေလံတင်လိုက်တယ်မဟုတ်လား (ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က ရထားတယ်နော်) …
ဘဘကင်းရေ မိုးစက်ရဲ့နာမည်ကို ပထမဆုံးပို့စ်မှာကတည်းက ရှင်းပြီးသား